DOWNLOAD Hydroptere v2 Ny sambo manidina X-Plane 10
Hydroptere v2 Ny sidina manidina X-Plane 10
Fa X-Plane 10.10 + Windows irery ihany. Aza hadino ny mamaky ny tahirinkevitra tafiditra.
Hydroptère no sambo voalohany mandeha amin'ny baran'ny knee 50 ao anaty sail, izany no 92,6 kph, avy eo ny 100 kph miaraka amin'ny teboka 56,3 knot (104 kph).
Ny Hydroptère dia hydrofoil amin'ny fanandramana andrana noforonin'i yachtsman frantsay Alain Thébault. Ny famolavolana hydrofoil multihull dia mamela ny sambo mitondra herinaratra hahatratra haingana be amin'ny rano. Ny famolavolana dia mifototra amin'ny traikefa avy amin'ny sambo fiaramanidina hydrofoil izay natsangan'i Thébault tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny faran'ny Éric Tabarly hatramin'ny taona 1990. Tamin'ny 5 Oktobra 2008 dia nahatratra hafainganam-pandeha 52.86 knot (97.90 km / h; 60.83 mph) izy, na izany aza dia lavitra lavitra noho ny 500m ilaina mba hahafeno fepetra hahazoana firaketana ofisialy manerantany. Tamin'ny 21 Desambra 2008, ny Hydroptère dia nahatratra 56.3 knot (104.3 km / h; 64.8 mph) akaikin'ny Fos-sur-Mer, saingy nivadika vetivety taorian'izay.
Tamin'ny 4 septambra 2009, ny Hydroptère dia namaky ny firaketana an'izao tontolo izao, ka nahavita hafainganam-pandeha 52.86 knot (97.90 km / h; 60.83 mph) nandritra ny 500m tao anaty rivotra 30. Tamin'ny novambra 2009 dia novakiny ny sakana 50 knot nandritra ny kilometatra nautika tamin'ny hafainganam-pandeha 50.17 knot (92.91 km / h; 57.73 mph) tany Hyères, France. (Wikipedia)
Mametraka ny hydroptère amin'ny tranokala nautical:
Menu / Place / karatra (sarintany) local /
Ataovy eo amin'ny rano ny Hydroptère ary manitsy ny haavon'ny fandraisana amin'ny tranokalam-piaramanidina nautical.
Fafao ny vatofantsika, voafantina amin'ny fitendry "V".
Hydroptère dia mivezivezy amin'ny fandinihana ny toerana misy ny lay momba ny sakan'ny sambo, ampiasainao ny baikonao mba hanafainganana ny lokonao:
Hahazo haingana ianao; Amin'ny alàlan'ny fiaramanidina (amin'ny haingo "lehibe").
Miadana ianao; amin'ny sambo manaitaitra (lay fialan-tsasatra).
Ny familiana dia mandeha amin'ny alahelon'ny fihodinan'ny jiro.
Mba hahazoana ny haingam-pifanandrinana amin'ny haingam-pandeha goavana:
Miaraka amin'ny fitaovana "2D pan", dia azonao atao ny manitsy ny takelaka amin'ny sambo miaraka amin'ny jiron'ny hazakazaka (asehoy ny familiana sy ny fametahana) ary ampifanaraho ny làlam-pamokarana (mifanipy amin'ny asany) izay mifanaraka amin'ny dite amin'ny vatany afovoany.
FANAMARIHANA: X-Plane tsy mitandrina ambonin`ny anti-drift nilentika tao anaty rano. Ny hydroptère (v2) dia tsy manana plugin "anti-drift / rano". Ity fanahafana ity dia namboarina mba hanakaiky ny zava-misy sy ludic.
NY FIKAROHANA X-Plane 10
"Fikirakirana / fikandrana / fikirakirana / joystick § Fitaovana / zone"
"Fomba fanovana / fanolorana / fahitana latabatra"
Ampidiro eo amin'ny 50 sy 100 ny sandany.
"Safidy / Safidy famerana /"
Fafao ny safidio Manaova sary isa-joro,
Esory ny fampiharana HDR
Tontolo iainana - Ny toetr'andro "toro-hevitra omena":
Ambony havoana matevina 01.000
Ny haavon'ny haavony 000.1 (tsy mihoatra ny 2.0)
Ratsy lehibe 10.0
Tena mampiavaka ny teknikan'ny Hydroptère:
Ny fitaovam-piadiana dia naparaky ny karbaona sy ny hodi-jaza, arakaraka ny teknolojia nampiasaina ho an'ny fiakaran'ny RAFALE. Izy ireo dia novaina sy nahatsikaritra ny orinasa momba ny Aerospace.
Aza hadino fa :
Ho fampiroboroboana an'io tetikasa io, ny plugin fanampiny (Developed by Sandy Barbour) dia tokony hatsangana.
tsidiho https://www.xpluginsdk.org/misc_plugins.htm ary afeno ary apetraho ny plugin 'CustomSBDatarefs004'.
Ity sary ity dia mampiasa fitaovana avy amin'ny tranokalan'ny OpenSceneryX. Raha mbola tsy nametraka azy ianao dia mandehana any https://www.opensceneryx.com
Downloads 4 298
Nohavaozina taminy 19-03-2013